Gbasara Anyị - S-conning Technology Group Ltd.
S-conning Technology Group Ltd, bụ otu n'ime ndị ọkachamara ígwè emeputa, guzosie ike na 2010, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ekpuchi ebe ndị 5200㎡, akpan-agba mbọ ka High-ọgwụgwụ ahaziri Industrial akpaaka na ulo oru ọgụgụ isi.
Site na ikike R & D siri ike na sistemụ mma dị elu, S-conning Tech na-akwado usoro ahịa ụwa niile site na: Usoro nyocha na igwe mbukota maka sirinji enwere ike 、 .
S-Conning bụ onye otu ndị na-ahụ maka ọgwụ na China, onye otu China resin na resin yana ndị otu na-ahụ maka nrụkọ ngwaahịa, onye otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe ịchọ mma nke Guangzhou na onye otu na-ahụ maka teknụzụ izugbe maka igwe eji ahazi onwe ya. Anyị meriwo ọtụtụ asambodo, dị ka "New elu-tech enterprise", "Guangzhou sayensị na nkà na ụzụ ọhụrụ obere ibu enterprise", "2016 patent e kere eke nwere ụlọ ọrụ", "Safety mmepụta Standardization ụlọ ọrụ" na na. The ụlọ ọrụ mechaa ISO9001 quality usoro asambodo & OA asambodo.
S-conning Tech na-etinye aka na nyocha ebighi ebi maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-arụ ọrụ, na-agbanwe agbanwe na teknụzụ na-adịgide adịgide ma na-elekwasị anya na ngwụcha ngwụcha proud anyị nwere obi ụtọ maka igwe anyị dị oke elu na-agba ọsọ karịa mba 100 ma nwee ọmarịcha aha, site na ịgbasa usoro sara mbara, S-conning na-arara onwe ya nye mgbe nile iji gbalịsie ike inweta ọrụ ndị ọzọ ga-aba uru site na ọnụnọ ụwa na ụlọ ọrụ ụwa.
Ahịa Ahịa anyị
Anyị nwere ndị ahịa 5 zuru ụwa ọnụ…
• Africa, n'etiti ọwụwa anyanwụ
Ajuju gi na ndi ajuju nile ka a ghaziri duputa ndi otu aka nri dika obodo gi ma obu obodo ebe oru a di. Otu ọ bụla na-ere ahịa nwere Onye isi njikwa, Ndị Nlere Ahịa na Ndị Nnọchiteanya Ahịa, ndị ha niile nwere ọfụma ma nwee nghọta - ọ bụghị naanị na ngwọta ngwaahịa kamakwa n'ahịa gị.
TOP 3 soplaya na ahịa China - ebe anyị kachasị na akara igwe akara, akụrụngwa igwe.
China otu onye otu ndị otu ọgwụ ọgwụ.
O The OEM soplaya n'ihi na ndị ọzọ igwe ụlọ ọrụ na-eduga ụlọ ọrụ.
Onye nchoputa onye isi nke teknụzụ izugbe maka igwe eji ahapụta onwe ya.
→ Guangzhou ntecha ụlọ ọrụ mkpakọrịta otu.
Label Applicator Machine N'ihi igbe, Top na ala Labeler, Label Printer N'ihi Ngosiputa ite karama, Sirinji Syringe na nyocha usoro, Plastic akara igwe, Commercial Bottle Labeling Machine,